Khasaaraha Qaraxyadii Muqdisho Oo Dhammeystiran – Goobjoog News
Weriyeyaasha Goobjoog News ayaa booqasho iyo xiriir la sameeyay Isbitaallada magaalada Muqdisho si xog dhab ah looga helo dadkii waxyeelladu soo gaadhay.
Isbitaalka Madiina: sida uu Goobjoog News madaxa Isbitaalka Dr. Cabdiqadir Macalin Xuseen u sheegay waxaa la geeyay meydadka 27 iyo 12 dhaawac ah, dhaawacyadii la geeyay labo ayaa geeriyootay, 10-na waa la jiifiyay.
Daaru-shifa: Waxaa Goobjoog News la hadlay Dr. Cabbaas Maxamud, agaasimaha Isbitaalka, waxuuna sheegay in la soo gaarsiiyay 15 dhaawac ah, 8 fudud, 6 la jiifiyay halna wax looga qaban kari waayey cisbitaalka.
Isbitaalka Erdogan (Ex Digfeer): Dhakhaatiir la hadashay Goobjoog News waxaa ay noo sheegeen in 7 dhaawac ah la soo gaarsiiyay.
Isbitaalka Ummah: Qaar ka tirsan dhakhaatiirka ayaa Goobjoog News u sheegay in ay soo gaareen 16 dhaawac ah, oo labo ka mid ah ay u gudbiyeen Erdogaan, halka mid kale uu Isbitaalka ku dhintay.
Guud ahaan dhimashada ay Goobjoog News diwaan-gelisay waa 35 halka dhaawaca uu gaaray 55 qof.